Ny fitaovana toy ny volon'ondry dia afaka mahatadidy sy manova endrika
Araka ny fantatry ny olona nanitsy ny volon'izy ireo dia ny rano no fahavalo. Ny volo izay mahitsy amin'ny alàlan'ny hafanana dia hiverina ao anaty volo amin'ny minitra hikasohany rano. Nahoana? Satria ny volo dia manana fahatsiarovana endrika. Ny fananana ara-nofo dia mamela azy hanova endrika ho setrin'ny fanentanana sasany ary hiverina ...
Hanatrika ny foara 128 amin'ny Canton an-tserasera izahay, faha-15 ny fotoana fampirantiana. Hatramin'ny faha-24.
2.We hanatrika ny foara 128th Canton amin'ny Internet, ny fotoana fampirantiana dia faha-15. Hatramin'ny faha-24. Okt. Tongasoa eto hitsidika ny trano fivarotanay. Hampahafantarina ny tranonkalantsika raha vao mivoaka avy eo. Amin'ny maha mpamatsy ara-dalàna an'i Fair Canton, dia manatrika canton foibe manomboka amin'ny 114, indroa isan-taona, hatrany amin'ny Mey sy Okt. amin'ny Gu ...
Ny minisiteran'ny indostria sy ny fampahalalam-baovao sinoa dia mamoaka ny angon-drakitra fanondranana, manomboka ny volana jan.
1. Ny minisiteran'ny indostrian'ny indostria sy ny fampahalalam-baovao sinoa dia manome ny angon-drakitra fanondranana, nanomboka ny volana janoary ka hatramin'ny aogositra tamin'ny taona 2020, ny varotra Sinoa tamin'ny lamba natondrana dia $ 187,41 miliara Dolara amerikana, ny fitomboana 5,62% isan-taona. Amin'ny volana Aogositra amin'ity iray volana ity, ny sandan'ny fanondranana dia 14,72 tapitrisa Dolara amerikana, ny fitomboan'ny 4 ...
Handeha hanatrika fampirantiana canton mivantana an-tserasera amin'ny volana novambra isika any.
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-07-22
Blank Hoodie, Fleece Hoodie, Custom Hoodie, Fanontana hoodie manokana, Hoodies Unisex, Plain Hoodie,